Home Wararka Fahad Yasin oo qaab dhuumaaleysi ku tagay Qatar
Fahad Yasin oo qaab dhuumaaleysi ku tagay Qatar
Agaasimaha hay’adda sirdoonka Soomaaliya, Fahad Yaasiin Daahir, ayaa socdaal aan la shaacin wuxuu ku gaarey waddanka Qadar, sida MOL loo xaqiijiyay.
Booqashadiisa qarsoodiga ah ayaa kusoo aadeysa xilli waddanka galayo doorasho isla markaana sidii loo dardargelin lahaa arrimaha coddeynta looga arrin-sanayo caasimada Muqdisho.
Dooxa ayaa ah saameyn dhaqaale waxay ku lahayd ololihii 2017-kii taasoo dhabaha u xaartey guusha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tilmaamaheeda ku shaqeeyay afartii sano ee lasoo dhaafay walina u muuqanaya mid diyaar u ah in uu soo laabto.
“Socdaalka Fahad ee Qadar waa mid caadi ah oo qeyb ka ah safarada uu bilooyin kadib ku tago Dooxa. Balse waxa kalkan cusub waa in uu kusoo aadey kahor doorashooyinka iyo in uu isagu musharax u yahay kursi Xildhibaan,” ayay sheegeen illaha.
Fahad, oo afartii sano ee lasoo dhaafay ahaa gacanta midig ee farmaajo isla markaana gaarayey go’aanada ugu waaweyn ee dowladda, ayaa doonaya in uu kursiga Xildhibaano ee beeshiisa degta maamulka HirShabeelle kala wareego Faarax Cabduqaadir.
Ma ahan kaligii, wuxuu sidoo kale doonayaa in uu soo saaro saraakiil kale oo kamid ah hogaanka iyo dharcadka hay’adda nabad-sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA.
Jagada Xildhibaanimo ayaa la aaminsan yahay in ay u goobayaan sidii ay isugu ilaalin lahaayeen afarta sano ee soo aadan haddii ay ku fashilmaan soo laabashada Farmaajo “maadaama ay tacadiyo iyo dambiyo waaweyn galeen intii ay xafiiska joogeen”.